Ifulethi elingasechibini elinamakamelo okulala - I-Airbnb
Ifulethi elingasechibini elinamakamelo okulala
Tre Capitelli, Lombardia, i-Italy
Leli fulethi litholakala e-Tourist Village Tre Capitelli epaki elibheke i-Lake Idro. Ifulethi elingu-35 elinezikwele lisesitezi sokuqala sendlu yemindeni emine futhi lakhiwe ngekamelo lokuphumula elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa/ usofa (imibhede yangempela engasetshenziswa njengosofa), ikhishi elincane, ikamelo lokulala elilala abantu ababili, indlu yokugezela eneshawa, i-balcony enokubukwa echibini. Ifulethi lingamashumi ambalwa amamitha ukusuka echibini.
Ibheke ngqo eLake Idro, leli fulethi litholakala eTourist Village Tre Capitelli ecwiliswe epaki eliluhlaza elinezitezi zemvelo zehla ngobumnene ngasebhishi, linikeza amafulethi umbono omuhle wechibi. Idolobhana iholide ekahle imindeni kanye abathanda ezemidlalo ukuxhumana nemvelo.
Echibini i-Idro abadobi babehlala kulawa madolobhana avamile, anemizila yawo emincane kanye nemigwaqo engaphansi yabahamba ngezinyawo, ovulandi abagcwele izimbali namagceke. Lapha ungathola isiko nokwethembeka, ngokunaka ngokukhethekile ukuhleleka nokuhlanzeka. Abathandi bemvelo bangathatha uhambo lwe-alpine lwabaqalayo kanye nabalandeli bangempela. Abathandi bezemidlalo ye-adrenaline bangakhetha phakathi kwesithuthuthu sentaba esinezintaba ngesevisi ye-schuffle, ukuvakasha kwezintaba ngezintaba ngosizo lwabaqondisi basendaweni, i-canyoning, i-tandem paragliding kanye nokugibela emizileni eminingi ekhuphukayo ezungeza ichibi.
Ukwamukela kwethu kuvulekele umphakathi ngezikhathi ezichazwe ngokucacile futhi sitholakala njalo ngocingo.
Inombolo yepholisi: 017082-CIM-0016
Hlola ezinye izinketho ezise- Tre Capitelli namaphethelo